ကမ္ဘာကို ဂြိုလ်သားတွေ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ဟု နာဆာ နာမည်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးပြောကြား… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကမ္ဘာကို ဂြိုလ်သားတွေ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ဟု နာဆာ နာမည်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးပြောကြား…
ကမ္ဘာကို ဂြိုလ်သားတွေ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ဟု နာဆာ နာမည်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးပြောကြား…
Posted by lu ta lone on May 4, 2010 in Arts & Humanities, Computers & Technology, Creative Writing, Drama, Essays.., Other - Non Channelized, Science & Religion, Sciences & Resources | 14 comments
ကမ္ဘာကို ဂြိုလ်သားတွေ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ဟု နာဆာ နာမည်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးပြောကြား... လူတလုံး အာဘော်...
နာဆာမှ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ Stephen Hawking ဟာဂြိုလ်သားများရှိတယ်ဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကြီးဟာ ထိုဂြိုလ်သားများရဲ့ ကျူးကျော်မှု့ကို ခံရနိုင်တယ်လို့
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများအရ အကျိုးအကြောင်းစပ်ဆက်ပြီး အာကာသ
ဆိုင်ရာ နာမည်ကျော် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဟာ စကြာဝဠာရဲ့ တစ်နေရာမှာ
ထို သတ္တဝါ (ဂြိုလ်သား) တွေဟာ
ကမ္ဘာရဲ့ ကောင်းမွန်းတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို လိုခြင်မှု့ကြောင့် ကိုလိုနီလုပ်
Hawkingကကျွန်တော့် စိတ်ကူးနဲ့ စဉ်းစားကြည့်တာ ထိုသတ္တဝါတွေမှာ လဲ ကြီးမားတဲ့
ယာဉ်တွေရှိပြီး လောလောဆယ်တော့ သူတို့ ဂြိုလ်ကထွက်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကိုသာ
ထိုသတ္တဝါတွေဟာ ဒါထက်ပိုအဆင့်မြင့်ပြီးရေကြည်ရာမြက်နုရာ နေရာတွေကို သိမ်းပိုက်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာကို ရောက်ရှိပြီး သိမ်းပိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်၍ ထိုသတ္တတွေဟာကျွန်တော်တို့ဆီကို အမြဲတမ်း လာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့
ဘာနဲ့တူမလဲဆိုရင် ခရစ္စတိုဖာ ကိုလံဘတ် အမေရိကန်ကို ပထမဆုံးခြေချခဲ့သလိုဘဲ
From: Thinsar Yaung Chi
တကယ်လို ယုံကြည်ထားရင် ..နာဆာအနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားသင့်ပါတယ်.။
အဲဒါကို စီအန်အန်မှာ ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။
ပါမောက်ခဟောကင်းဟာ စင်္ကြာဝဌာထဲက တွင်းနက်တွေအကြောင်းစတင်သိရှိ၊ပြောကြားခဲ့သူဖြစ်တာမို့ သူ့စကားအလေးအနက်ထား ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
ပါမောက်ခဟောကင်းက အေလီယန်တွေဟာ မွန်ရိုးလို လှမယ်လို့ မထင်ကြဖို့လည်းသတိပေးထားပါသေးတယ်။
လူသားတွေဟာ အေလီယန်တွေကို ယှဉ်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
သမတအိုဘားမားရဲ့ ညူကရီးယားလက်နက် အလုံးစုံကင်းမဲ့တဲ့ကမ်ဘာမြေဆီကို သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကို သတိပေးတာနဲ့အတူ..
ဘာသာရေးယုံကြည်တာမတူညီမှုကြောင့်လူသားအချင်းချင်း စစ်ပွဲကြီး-ငယ်တွေဖြစ်လာနေတာကို သတိပေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်မိပါကြောင်း…။
( ညူ-လက်နက်ကသာ အေလီယန်တွေ ရန်ပြုလာတာကို ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်၊ကမ်ဘာပြင်ပက ရန်သူရှိလာရင် လူသားတွေဟာ အသားအရောင်၊ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေမေ့လိုက်ပြီး ပိုညီညွတ်သွားမယ် ဆိုတဲ့ အခြေခံကို မူတည်တွေးတာဖြစ်ပါတယ်)
ဒါပေမဲ. သူရဲတော.ကြောက်တယ် သူကမြင်မှမမြင်ရတာကြီးကိုး။
ဆရာ ဘာညာ® says:
ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ တော့ကျွန်တော် ထင်တယ် ဗျ ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ metacafe မှာ ပုဂံပြား ပြန် အကြောင်းတော်တော် လေး နေ ရာယူလာတာကို တွေ့ ရှိရပါတယ် ။ အတု လားလို့ တော့ အစ က ထင်ရောင် ထင်မှား ဖြစ်ခဲ့ သေးပါတယ် ။ သေချာအောင် ကြည့်တော့ 3D မဟုတ်ကြောင်း အစစ် ဟု ထင်ရကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။
good tal , good tal, . I don’t know about other country, other nation. Our nation “Myanmar” is well united . So, “ILEN” You can come anywhere in the world.But Not to “MYANMAR”. :)))))))))))))
ဟော့ကင်းကို ကျွန်တော်တော့ မယုံဘူး။ အတွေးလွန်နေတာလို့ ထင်တာ။ အတွေးလွန်လို့ ခေါင်ခေါင်လေး တွေးမိသွားတာ။ အတွေးခေါင်သွားတာပေါ့ဗျာ။
ကမ္ဘာကျော် တစ် ယောက်က ပြော တာ ဆို ဖြစ် နိုင်၇ှိပါတယ်။ဟော့ကင်းက ရူပဗေဒ ပညာပဲ လေ။ သူမှန်းဆတတ်မှပေါ့။သက်၇ှိတွေနေနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာသစ် ကိုတွေ့ ၇ှိထားကြောင်းကိုတော့ ကြားဘူးပါတယ်။ လေ့ လာနေဆဲလို့ ဆဲ ပြောနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဂြိုလ်သားဆိုတာကို ရုပ်ရှင်တွေထဲ မှာ ပဲ မြင်ဘူးတယ်။၃၁ဘုံက ဘယ်ဘုံမှာပါလဲ တော့ မသိဘူး။ကိုmoethiha ပြော သလိုဖြစ်ရင် တော့ပို ကောင် တာပေါ့။ နင် ရင်အုပ်လိုက်လို့ရတယ်။ avata ကားထဲကလိုအကြီးကြီးတွေဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျ။ သူကပြန်ဂျင်းသွားလိမ့်မယ်နော်။ဆရာ ဘာညာ® ရှင်သလိုကတော့ ပြောရမယ်ဆို သူတို့ တွေ့ တာ တွေ က အစစ်အမှန်လို့ ပြောလို့မရဘူးလေ။ အနောက်နိုင်ငံတွေက တာဝေးပစ်ဒုံးတွေ စမ်းသပ်လေ့ ၇ှိတယ်လေ။ အဲ ဒီက လွင့် ထွက်လာတဲ့ အပိုပစ္စည်တွေပဲများတာပါ။ဒါကိုလူတွေက ufoလို့အထင်မှားတာပါ။ ဝေ ဟင်မှာ ၀ဲတယ်ဆိုတာက ဂြိုလ်ထုလွှတ်တင်တဲ့အခါမှာ သုံး တဲ့ ဒုံးတွေ ကမ္ဘာမြေပေါ်ပြန်ကျလာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထင်ပါတယ် ..နံမည်ကြီးသတင်းဌာနတွေ မှာကိုအလေးထားဖေါ်ပြနေကြပါပြီ
ပိုစ်တစ်ခုမှာ အရင်က သူကြီးခိုင် က ကြွက်တွေ ကို မြင်ရင် တွေ့ရာနေရာမှာ သတ်ပစ်ဆိုပြီး တော့ ပြောတော့ ….ကျွန်တော်က လူက ကြွက်ထက် အသိဥာဏ်မြင့်တော့ လုပ်ထားဦးပေါ့… လူ့ထက်အသိဥာဏ်မြင့်ထက် သတ္တ၀ါတွေလာရင်…၀ဋ်လည်လိမ့်မယ် လို့ ပြောထားတာ….သူမယုံဘူးလေ………အခုတော့ အခုတော့ ……း)
စွမ်းရည်ထက်မြက်တဲ့ ဂြိုလ်သားတွေကို တွေ့ဖူးတဲ့သူများရှိပါသလား။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းပါတယ်။
သူတို့လည်း လူမဟုတ်လို့ လူ့ဘုံမဟုတ်ရင် တစ်ဘုံဘုံနေမှာပေ့ါ
ကမ္ဘာကို လာတိုက်ခိုက်ဖို့တော့ သိပ်မယုံဘူး
လာတိုက်တဲ့အချိန်ကြရင် ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေပဲ ကျန်ခဲ့မှာဆိုတော့